Bheka ukuthi unayo yini i- "mshelper" malware ku-macOS futhi sizokutshela ukuthi ungayisusa kanjani | Ngivela kwa-mac
Bheka ukuthi unayo yini i- "mshelper" malware kuma-macOS futhi sizokutshela ukuthi ungayisusa kanjani
Kunamacala ambalwa lapho ungaba khona ne-malware ku-Mac futhi kungenzeki ngaphandle kokuthi usebenzise isoftware noma izinhlelo zokusebenza ezingaphandle kwesitolo sohlelo lwe-MacOS. Noma kunjalo, Akubuhlungu ukuthi ngemvamisa ethile ubheka amafolda esiwaphawula ngezansi.
Izimpawu eziboniswa kwi-Mac ene-malware ukusetshenziswa ngokweqile kwe-CPU, okuholela emsindweni omningi nakukhipha ibhethri ngokweqile kuma-laptops. Enye ye-malware ejwayelekile kulezi zinsuku i- "mshelper" futhi sikufundisa ukuthi ungayithola kanjani futhi uyiqede.
Izindaba zale malware ziqoqwa kusuka ku- Izinkundla zokusekela ze-Apple . Abasebenzisi bakhalaza ngokusetshenziswa ngokweqile kwemithombo, bayayihlola kumqapha womsebenzi, ngejubane le-CPU. Ngaphezu kokuba sengozini, kunokuhamba kancane kwezinye izinqubo. Lokhu kusho ukuthi abalandeli baxhunywa kaningi kunokujwayelekile, ngenhloso yokupholisa imishini, kubangele ukwehla okukhulu empilweni yebhethri.
Noma kungaziwa ukuthi yenzani le malware, ngokusetshenziswa kwamandla ngaphezu kokufanele, Konke kubonakala kukhombisa ukuthi yi-adware ekhiqiza ama-cryptocurrensets nge-Mac yethu. Ngakolunye uhlangothi, konke kubonakala kukhombisa ukuthi ifakiwe kumakhompyutha ngemuva kokufakwa kwesoftware ethile, esikhundleni sokusakazeka ngezinye izindlela.
2 Uma kufanele uyisuse:
Vula Umsebenzi Wokuqapha, etholakala kufayela le- applications ifolda nezinsiza zangaphakathi, noma ngqo kusuka ku-Spotlight.
Uma usungaphakathi, chofoza kuthebhu ye-CPU bese uhlela ngegama lenqubo.
Manje, skrolela ukuzama ukuthola "mshelper". Ku-mac exoxiwe akuveli, ngakho-ke, ayitheleleki.
Uma kufanele uyisuse:
Uma uke wacabanga ngokumisa inqubo, lokhu akunangqondo kangako, ngoba uhlelo lwenzelwe ukuqala futhi.
Ngakho-ke, kufanele uye ku- Isitholi- Isitoreji sangaphakathi (imvamisa iMacintosh HD) - Ilabhulali - LaunchDaemons.
I-malware ibizwa com.pplauncher.plist. Susa ifayela njenganoma iyiphi enye.
Uzothola elinye ifayili okufanele futhi ulisuse kule ndlela elandelayo: ukwesekwa kwelabhulali-Isicelo kanye ne-pplauncher.
Impela i-Apple izobe isebenza ukwengeza lesi siqephu, kepha akulimazi ukusihlola.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Bheka ukuthi unayo yini i- "mshelper" malware kuma-macOS futhi sizokutshela ukuthi ungayisusa kanjani
Idokodo le-3-in-1 le-Apple Watch, AirPods ne-iPhone yakho
IMoshi yethula ikhebuli ukushaja iMacBook yakho kanye nanoma iyiphi idivayisi ye-USB-C